Talooyin: Khubaradu waxay ka jawaabaan su'aalaha muhiimka ah ee ku saabsan COVID-19 | Lantian Bishui
Maxay tahay sababta looga shakisan yahay suuqa jumlada 'Xinfadi' inuu yahay isha laga helay cudurka ugu dambeeyay ee COVID-19 ee ka dilaacay magaalada Beijing?
Caadi ahaan, heerkulka hooseeya, fayraska dheer wuu noolaan karaa. Suuqyadan jumlada ah, cuntada badda ayaa lagu keydiyaa barafaysan, oo awood u siinaya fayraska inuu sii noolaado muddo dheer, taasoo keentay fursado badan oo ah inuu dadka ugu faafo. Intaas waxaa sii dheer, dad aad u tiro badan ayaa gala oo ka baxa meelahaas, qof keli ah oo la gala fayraska loo yaqaan 'corona virus' wuxuu sababi karaa inuu ku faafo fayraska goobahan. Maaddaama dhammaan kiisaska la xaqiijiyay ee cudurkan dillaacay laga helay inay xiriir la leeyihiin suuqa, fiiro gaar ah ayaa loo siiyay suuqa.
Waa maxay isha gudbinta fayraska ee suuqa? Ma dad, cuntooyin sida hilib, kalluun ama waxyaabo kale oo lagu iibiyo suuqa?
Wu: Aad ayey u adag tahay in la soo gabagabeeyo halka saxda ah ee laga kala qaado. Ma soo gabagabeyn karno in salmon-ka lagu iibiyo suuqa uu yahay isha kaliya lagu saleynayo ogaanshaha in goynta looxyada salmon ee suuqa laga baaro fayraska. Waxaa jiri kara fursado kale sida in hal milkiil oo ka mid ah guddiga goynta uu ku dhacay cudurka, ama raashin kale oo uu iibiyo milkiilaha guddiga goynta ayaa wasakheeyay. Ama iibsade ka yimid magaalooyin kale ayaa sababay fayraska inuu ku faafo suuqa. Qulqulka dadka ee suuqa ayaa ahaa mid weyn, waxyaabo badanna waa la iibiyay. Uma badna in isha saxda ah ee la isugu gudbiyo lagu heli doono waqti gaaban.
Intii uusan dillaacin, Beijing ma aysan soo sheegin wax kiisas cusub oo maxalli ah oo lagu kala qaado COVID-19 in ka badan 50 maalmood, fayraska loo yaqaan 'corona virus'na ma ahayn inuu ka soo bilowdo suuqa. Haddii la xaqiijiyo baaritaanka ka dib in kiisaska cusub ee dadka laga helay fayraska midkoodna uusan ku dhicin Beijing, markaa waxay u badan tahay in fayraska laga soo geliyay Beijing dibedda ama meelaha kale ee Shiinaha iyada oo loo marayo badeecooyin wasakhaysan.
Waqtiga boostada: Juun-15-2020
Alaabada Kulul, Khariidadda bogga, Masaxada Shaashadda Shakhsi ahaan loo Duubay, Nadiifiyeyaasha Qorraxda, Caddadka Tilmaamaha Ugu Fiican, Cadka Nadiifinta Lens,